"टिन" के हो? उत्पत्ति र शब्द को परिभाषा "tin"
समाचार र सोसायटी, संस्कृति
केही स्ल्याङ्ग अवधारणाहरू र अभिव्यक्तिहरू व्यक्तिको सामना गर्ने व्यक्तिलाई बुझ्न पूर्णतया दुर्गम हुन सक्दछ। "टिन" के हो, र यो शब्द किन कुनै पनि कारणको लागि प्रयोग गरिन्छ? यो कहाँबाट आयो र यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ?
विभिन्न प्रकारको टिन
यदि तपाईं शब्दकोशमा हेर्नुहुन्छ, तपाइँ सबै भन्दा पहिला पत्ता लगाउनुहुनेछ कि यो इस्पातको पतली पट्टी टिनको परत संग ढाकेको छ। सुरुमा, यो एकदम महंगी प्रकारको धातु थियो, टिनलाई हातले बनाइयो, तर उत्पादनको स्वचालन संग, लागत घट्दै गयो। यस प्रकारका धातुबाट डिब्बेहरू, सस्तो बर्तनहरू, छतको सामग्री। यस सन्दर्भमा, "टिन" शब्दले बेइजिङ रंग प्राप्त गरेको छ - तथाकथित सस्तो "लोक" कारहरू। अभिव्यक्ति "टिन" अहिले के हो?
सबैभन्दा पहिला, यो एक predicate - राज्य को वर्गबाट एक शब्द हो। उदाहरणको लागि, "डरलाग्दो" वा "आपत्तिजनक" भविष्यवर्ती विज्ञापनहरू हुन्। वाक्यांशमा "लाइटमा आत्मा हो," एक पूर्वनिर्धारित प्रयोग गरिन्छ, अर्थ एक शाब्दिक प्रकाश छैन, तर केवल एक समान भावनात्मक सनसनी। यी शब्दहरूले भावनात्मक अवस्था, धारणाको भावनात्मक टिपोटलाई सम्भव पार्न सम्भव बनाउँदछ। यस अर्थमा, शब्द "टिन" प्रयोग गरिन्छ। यो एक अवधारणा के हो भन्न सकिन्छ कि यो धातु धातु उत्पादन वा यसको बारे मा उत्पादनहरु छैन?
"टिन!" भनिरहँदा वास्तवमा अन्तरालियन्त्रक अर्थ पत्ता लगाउने प्रयास गर्दा केही घटनाहरूको प्रतिक्रियामा, यो पूर्णतामा ध्यान दिन योग्यको लायक छ। "बारह कुर्सी" पुस्तक बाट प्रसिद्ध एल्लोकका ओग्रेजमा त्यहाँ एक शब्द "डरावनी" थियो। यो परिस्थिति, उत्खनन, आश्चर्य, र सामान्यतया कुनै पनि परिस्थितिमा निर्भर गर्दछ।
"टिन" के हो? यो एक समान अवधारणा हो, जुन केहि पनि भन्न सक्छ। अधिकतर अवस्थामा, हामी केहि कुरा जुन भावनात्मक प्रतिक्रिया सामान्य र औसतभन्दा बाहिर जान्छ।
किन टिन, यो के हो कि धातु को पतली शीट को नाम को ट्रेसिंग को कारण, टिन मा कवर? सम्भवतः, यो "कठोर" बाट व्युत्पन्न गरिएको छ - पहिलेको स्प्रिंग अभिव्यक्ति जुन घटनाहरू, कुराकानी वा अन्य घटनाको रंग निर्धारण गर्दछ। उदाहरणको लागि, एक असामान्य र वर्गीकरण टोनमा अभिव्यक्तिलाई अस्वीकार गर्दछ जुन अर्को पढ्नको लागी स्पष्ट हुँदैन, असम्भवसाथ र असामान्य रूपमा।
चाँडै उद्घाटन "कठोर!" संज्ञा को वर्ग मा गयो, यसैले "कठोर शब्द" (अन्तिम क्रमशः मा उच्चारण) देखा पर्यो। "यो केही दयालु छ" - अभिव्यक्ति एउटै अवस्थामा प्रयोग गरिएको थियो, तर यहाँ सम्भवतः अवधारणाहरू "कठोर" र "क्रूर" संयुक्त थिए, त्यसैले तिनीहरू भयानक कुराबारे कुरा गर्न थाले। यस अवधारणाबाट सरलीकरण र गणनाको सिद्धान्तले शब्द "टिन" देखाएको छ।
प्रायः प्राय: प्रश्न "कुन टिन" छ भने इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूमा देखा पर्दछ जसले पूर्ण रूपमा स्लैङ्ग अभिव्यक्तिहरू प्राप्त गरेका छैनन्। सन्देशको जवाफमा यस्तो छोटो टिप्पणी प्राप्त गर्न, प्रयोगकर्ताले बुझ्न सक्दैन कि यो प्रशंसा गरिएको थियो वा डबल्ड गरिएको, अन्तरक्रियाकर्ताले के गरे? र जवान यो प्रश्न कम प्रायः उठ्छ, किनभने यो अभिव्यक्ति युवा स्लाङ्गको भाग हो र अक्सर मौखिक संचारमा पाइन्छ।
फोरम संचारमा फोरम, सोशल सञ्जाल वा सन्देशवाहकहरूमा तपाईले वाक्यांशको भावनात्मक रंगलाई समात्न अनुमति दिनुहुन्न, यदि यो एक मुस्कानको साथ छैन। "टिन" के हो? उद्घाटनको अर्थको परिभाषा पूर्णतया पूर्णतासँग सम्बन्धित छ। धेरै भन्दा अधिक अवस्थाहरुमा, यो एक स्थिति मा भावनात्मक समावेश छ कि "वाह!" को रूपमा अनुवाद गर्न सकिन्छ वा "एक दुःस्वप्न, म साँच्चै तपाईं संग सहानुभूति गर्दछ"।
एनालॉग र सेन्टिकल समीकरण
लगभग कुनै पनि स्लङ्ग शब्द को अनुरूप वा पर्याय छान्न सकिन्छ, यो बिना अनावश्यक डरबाट तिनीहरूलाई छेउमा राख्न निषेध गरिएको छैन। मुस्कान, विशेष आइकन र धेरै तरिकामा शब्दहरूसँग बुझ्नको लागि अवसर निर्धारण गर्दछ । टिन के हो , हामी पहिले नै फेला परेका छौं। अब आवश्यक भएमा यस शब्दलाई कसरी बदल्न सकिन्छ भन्ने बारे चिनौं।
"टिन! तपाई अहिले के गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? "- एक असहमति सहानुभूति र अन्तरक्रियाकर्ताको चासो। यदि तपाईं एक सकारात्मक तरिकामा आफ्नो भावनात्मक संलग्नता व्यक्त गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, "यसलाई" ठुलो "लाई तल" शब्द "," ठिक "र अन्य डेरिभेटिभ शब्दहरूसँग बदल्न सक्नुहुन्छ। यदि ट्याग "टिन!" एक चौंकाने भिडियोको साथमा आपूर्ति गरिन्छ, यो शाब्दिक "डराएर, हेर्नुहोस् के गरिरहेको छ।"
कुनै पनि स्लैङ्ग अभिव्यक्ति व्यवसाय पत्राचारमा अनुचित छ, यो शिष्टाचारको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हुनेछ। यस अवस्थामा, "टिन" शब्दको स्लैङ्ग अर्थ हामीलाई अभिव्यक्तित्मक अभिव्यक्तिको धारणा संग लेखकको लेखमा कथामा यो अवधारणा प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। निस्सन्देह, निजी पत्राचार सख्त विनियमित छैन, तर यो अन्तरक्रियाकर्ताको उमेर विचार गर्न लायक छ, त्यसैले तपाईं प्रत्येक शब्द को अर्थ बुझ्न छैन। शिष्टाचारका नियमहरू अनुसार, सानो अन्तरक्रियाकर्ताको लागि समायोजन गरिन्छ, र यसको विपरीत। यो सिद्धान्त मौखिक संवादको लागि पनि सही छ, स्लैंग अभिव्यक्तिको अभावले आदरलाई जोड दिन्छ।
यो विशेष रूपमा एक विशेष क्षेत्रीय, राजनीतिज्ञ वा आधिकारिक भाषणको रूपमा यस्तो निर्दिष्ट क्षेत्र उल्लेखनीय छ। स्लैङ्ग अभिव्यक्तिको प्रयोगले "मानिसहरूको नजिक" स्पिकरलाई बनाउँदैन, तर अनुपातको अर्थ अभाव र असक्षमता देखाउँछ। यदि भाषणलेखका प्रयासहरूद्वारा "टिन" भाषणमा देखा पर्दछ भने यस विशेषज्ञलाई थप काम गर्न नसक्नु हुँदैन।
स्लैंग अभिव्यक्तिहरूको इमेजरी र आजीवनताले हामीलाई अनौठो भावनात्मक सन्दर्भ निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ। तर एक कलात्मक प्रविधीको रुपमा, "टिन" र अन्य युवा शब्दहरू अत्यन्त सावधानीपूर्वक प्रयोग गरिनु पर्छ र सानो खुट्टामा।
आइस पैलेस (मर्मनस्क) - शहरको मनोरञ्जन र खेलकुद जीवनको केन्द्र
मस्कोमा ठाउँको विजेता स्मारक
त्यहाँ "आगो हाइना" छ? गलत निर्णयहरू
आधुनिक समाजमा स्वतन्त्रता के हो?
"पाल माला" (सिगरेट): ब्रान्डको इतिहास
पौराणिक मोटरसाइकल "Harley-डेभीडसन" र यसको इतिहास
उच्च गुणस्तर ढाला उत्पादन, Orac
एक सिलिन्डर लक कसरी चयन गर्ने?
Mandible - एक चिबुक कीराहरू?
कसरी बिरालो-केटी लागि एक सुन्दर नाम छनोट गर्न
प्रविधी carpal लागि शुरुआती हकी मा कास्ट
वसन्तमा हंसमा भाषण। क्यास र बतखलाई गोली हानीयो?
सपना व्याख्या - भ्यागुतो एउटा असल मित्र को घाँस Dreaming बसेर
एक मताधिकार व्यापार के हो? मताधिकार सम्झौता। सर्तहरू मताधिकार
बनाउन मिलाउने ओडी 80 बस
वाहन व्यवस्थापन गर्न वकील को शक्ति अब आवश्यक छ